နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: iPhone Killers !!!!
Htoo Tay Zar June 24, 2008 at 12:42 PM
ဖုန်းထဲမှတော့ iPhone နဲ့ SE ဖုန်းတွေကို ကြိုက်တယ်ဗျာ အခြားဖုန်းတော့ သိပ်စွဲစွဲလန်းလန်းမဖြစ်မိဘူး။ တချို့မော်ဒယ်တွေတော့ ကြိုက်တာမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျေးဇူးပါပို့စ်အတွက်
မေ June 24, 2008 at 2:06 PM
ko boyz ၀ယ်ပေးမယ်ဆို iphone မှမဟုတ်ပါဘူး။ sony ဖြစ်ဖြစ် samsaung ဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်။ သမီးက ဂျီးမများတတ်ပါဘူး။ :D
စိုးထက် - Soe Htet ! June 24, 2008 at 8:55 PM
ကိုပေါ June 24, 2008 at 9:24 PM
အကြည်တော်ရေ......ဒေါ်လာ တသန်းတန် လက်ကိုင်ဖုန်းကလေးများ တွေ့ရင် လက်တို့လိုက်စမ်းပါကွယ်။ နှစ်ထောင်အောင် ဖုန်းတွေကိုင်ရတာ စိတ်ညစ်နေပြီ။ အခုတောင် မနေ့ကမှ အသစ်စက်စက် ၀ယ်လာတဲ့ ဂျက်ဂွါးကား။ မှန်ပေါ်မှာ ယင်ကောင်နားသွားလို့ အသစ်တစင်း ထပ်ဝယ်လိုက်ရတယ်။
Ko Boyz June 24, 2008 at 9:37 PM
ကိုတေဇာ - ကျွန်တော်လဲ ဆိုနီ အဲရစ်ဆန်နဲ့ အခုနောက်ဆုံးထွက်မဲ့ သရီးဂျီ အိုင်ဖုန်းကို သဘောကျတယ်...။ တစ်ခြားဖုန်းတွေဆိုရင် အခုထွက်မယ့် ဆမ်ဆောင်းရဲ့ အုံမနီးယားပဲ...။
အန်တီမေ - သားထီပေါက်ရင် ၀ယ်ပေးမယ်နော့...။
ကိုစိုးထက်ကြီး - ကော်မဲန့်မှာ လာပြုံးပြသွားတာ ဘာသဘောဒုန်း...။
ကိုပေါ - အိမ်သာတက်ရင် စီးဖို့ ဖယ်ရာရီကို အမှိုက်ပုံမှာ ပစ်ထားတယ်...။ လာကောက်လှည့်ပါလား...။ အဟက်...။ ဒေါ်လာတစ်သန်းတန် ဖုန်းတော့ မတွေ့မိဘူး...။ စိန်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Vertue ဖုန်းတော့ ဈေးကွက်ထဲ ရောက်နေတယ်...။ တစ်သောင်းလောက် ရှိမလားပဲရယ်...။
ခင်မင်းဇော် June 27, 2008 at 10:05 AM
အမကတော့ ဖုန်းဆို စကားပြောလို့ရပြီးရော ..
သူများပေးတာပဲ သုံးတယ် ဟိဟိ..
တခါမှကို မ၀ယ်ဖူးဘူး.. ခုလဲ ဖတ်သာ ဖတ်တယ်။ သားရေတော့ကျသွားတယ် ၀ယ်ဖို့မစဉ်းစားမိသေးဘူး... နှမြောတယ် ...
Layma July 4, 2008 at 12:19 AM
Sony Ericsson ကို ဒီလောက်ညွှန်းနေကတည်းက ၀ယ်ထားလို့ ဖြစ်မယ်လို့ ...။ Sony Ericsson ကလှတယ်..။ iphone လည်း မိုက်တယ်...။ ဒါပေမယ့် လေးမတို့ကတော့ Nokia ပဲ ..။ :P